Sarakiisha ciidamada oo kulan ammaanka ku saabsan la qaatay dadka Shabeelaha Hoose-DHAGEYSO – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Cabdulqaadir Siiddii -- Sawir Hore
Saraakiisha Ciimadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka iyo maamulka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeelaha Hoose, aygoo ka wada hadalay iskaashi dhex mara ciidammada iyo shacabka si ammaanka loo sugo.
Gaashaanle Dhexe Xasan Maxamed Abuukar Jaamici oo ka mid ah saraakiisha ciidamada XDS ayaa shacabka iyo masuuliyiinta maamulka u sheegay in ay muhiim tahay in la wada shaqeeyo si ammaanka loo adkeeyo isla markaana looga adkaado kuwa nabadda diddan.
Guddoomiyaha Buulo Mareer Axmed Cismaan Ibraahin ayaa kulankaan ka sheegay in bulshada gobolka ay nabadda jecel yihiin isagoo dowladda dhexe ka codsaday in dayactir lagu sameeyo goobaha adeegga bulshada.
Qeybta hoose ka dhageyso warbixin uu kulankaas ka diyaariyay wariyaha Radio Muqdisho Mustaf Maxamed Xiireey.
Bardaale: Tuulooyin lagala wareegay Al-Shabaab